Soo dejisan PDF-XChange Editor 6.0.318 – Vessoft
Soo dejisan PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor – software shaqaynaysa in la PDF files-shaqeeyaan. PDF-XChange Editor awood kuu siinayaa si aad u eegto, edit iyo beddelo PDF-waraaqaha. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay ula shaqeeyaan waraaqo kala duwan isku mar iyo qabsato font ama Zoom ee images. PDF-XChange Editor awood u soo saaro qoraal ka waraaqaha, diinta PDF-files si qaabab image iyo taageerada dhexgalka la barnaamijyada kale. PDF-XChange Editor sidoo kale kuu ogolaanaya in aad ku darto comments, la abuuro tooltips iyo print PDF-waraaqaha.
Arkaysid, tafatirka iyo BADDALIDDA ee PDF-waraaqaha
Goobta oo ka mid ah font size of iyo images
Daabacaadda ee PDF-waraaqaha
Ku darista of comments
Comments on PDF-XChange Editor:
PDF-XChange Editor Software la xiriira:
PDF Tool si loogu badalo files in qaabka PDF. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad doorato tayada diinta file ah oo ka kooban module ah printer dalwaddii.
English, Français, Español, Deutsch... novaPDF 8.7.943
PDF Qalab Functional si loogu badalo faylasha in qaabka PDF. Software waxa uu leeyahay shaqooyin badan oo faa'iido leh oo ka mid ah module ah hago.
PDF Aaladda si loogu badalo faylasha qaabka PDF. Software ka kooban yahay tiro balaadhan oo ah qalab si weyn loo ballaariyo fursadaha shaqada la PDF files.
English, Français, Español, Deutsch... Foxit Reader 7.2.8.1124 iyo 7.2.5.0930
العربية, English, Українська, Français... MediaGet 2.01.3668
Qaar kale waxay Qalab wax ku ool ah si loo xakameeyo lacagta. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u la socdaan kharashyada ama dakhliga iyo tarjumayaan boos dhaqaale ee foomka of garaafyo.
English, Français, Español, Deutsch... Mozilla Firefox 49.0.1 iyo 50.0b6 rc 1